विवाह भएको ९ वर्ष पछि तिमीहरु दलित हौ भन्दै बुहारी घर छोडेर हिडिन् (भिडियो सहित)
June 30, 2020 1217
विवाह भएको ९ वर्ष पछि बुहारीले तिमीहरु दलित हौ भन्दै घर छोडेपछि परिवार रुँ’दै मिडियामा आएको छ । उनीहरुको एक छोरी पनि छन् । झापाको बाउनडाँगीमा भएको यो घटना सार्वज’निक भएपछि फेरी जातिय विभेदको विषय उठेको छ ।
९ वर्ष अघि वि’पिन बराइलीले भारतमा प्रेम विवाह गरेका थिए । गौरी गिरीसंग भएको विवाहको ९ वर्ष पछि अहिले वि’पिन एक्लिएका छन् । विपिन र गौरीको एक छोरी पनि छन्
कोरोना’का कारण लकडाउन जारी रहेकी कारण विपिन झापा स्थित घर आएका थिए । उनीलाई झापा आएपछि घर’मा सिधै आउन थिएनन् । उनीहरु क्वारेन्टिनमा बसे’का थिए । क्वारेन्टिनमा बसेको ३ दिन पछि उनको श्रीमती भने तिमीहरु दलित हौ भन्दै घर छोडेर हिडे’की छन् ।
झापा स्थित घरमा सासु बुहारी बस्थे । बुहारीले आफु’लाई कहिल्यै राम्रो ब्यवहार समेत नग’रेको सासुले बताएकी छन् । छोराले कमाएर पठाएको पैसा पनि बुहारीले कहिल्यै आफुलाई नदिएको सासुको भनाई छ । घर खर्च म आफै चला’उथे, छोराले पठा’एको पैसा पनि नदिने गरेको उनको भनाई छ ।
छोरा भारतवाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेकै बेला’मा बुहारी हिडेपछि पनि सासुले २ दिन सम्म छोरालाई त्यो कुरा सुना’इनन् । भारतवाट आएर छोरा त्यसरी बसेको छ, बुहारी कतै गएकी होली फर्केर आउली भनेर २ दिन सम्म छोरालाई केही नभनेर आफै खोजि’रहेँ । तर आइन उनले रुँदै भनिन्, मैले कान्छी बु’हारी भनेर कति मा’या गरेर राखेकी थिए ।
अहिले भने बुहारीले छिमेकी’लाई यिनीहरु कामी रैछन् म अब बाहुनसंग विवाह गर्ने हो भन्दै सुनाउने गरेको आफुले अहिले थाहा पाए’को बताइन् । उनले आफु’ले यस्तो सुन्दा पनि बुहारी’लाई केही नभनेको बताइन् ।
उनले आफुले आफ्नो बृद्ध भत्तावाट काम चला’एको बताइन् । ७५ वर्षको उमेर’मा पनि अरुको घरमा काम गर्न गएर पैसा कमाउने गरेको पनि उनले बताइन् । आफु अरुको घरमा का’म गर्न जाँदा बुहारीले रक्सि समेत खाने गरेको आफुले थाहा पाएको बताइन् ।
कसै’ले राम्रो दवाई हुन्छ अरे भन्ने सुनेकी थिए, उसला’ई खान मन लागेको होला भनेर के’ही भनिन्, सासुले भनिन्, एक दिन मासु पकाएको बेलामा खाउँ भनी मैले खाउँ भने ।
उनले निकै माया गरेर राखेकी बुहारी’ले त्यसरी दलित हौ भन्दै हिडेपछि अहिले नातिनीको भविष्य सम्झेर निकै चिन्ता लागेको बताइन् । सानी छोरी पनि आमा सम्झने गरे’की छन् । भिडियो हेर्नुहोस्…
Nextगर्भवती प्रसव पिडाले छटपटाउँदा पनि अस्पतालले भर्ना लिएन, यसरी सडकमै जन्मियो बच्चा
‘अब मलाई जिउने इच्छा छैन’ भन्दै सुशान्तका मिल्ने साथी सन्दीपले पनि गरे देह त्याग
यस्तो अनौठो गाउँ, जहाँ बिहेमा छोरीलाई सर्प दाइजो दिइन्छ !
ग्रह राशि अनुसार आज तपाईंको दिन कस्तो रहला ? हेर्नु`होस् आजको राशिफल
अन्तर्वार्ताबाटै सोनिकाले पारशलाई “कट्टा लिएर आउनुहोस् सरकार” भनेपछि.. (भिडियो सहित)
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (106399)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (68605)